Xubno kamid ah Guddoonka Barlamanka oo Gaas ku taageersan muddo kordhinta
GAROOWE, Puntland- Qaar kamid ah Guddoonka sare ee Barlamanka Puntland ayaa u ololaynaya in muddo sannad ah loo kordhiyo xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Gaas sida uu ogaaday Warsidaha Garowe Online.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Puntland oo la hadlay Garowe Online ayaa sheegay in mas’uuliyiinta sare ee ku jira Guddoonka ay dedaal ugu jiraan Sidii golaha looga dhaadhicin lahaa muddo kordhin sharciga aan waafaqsaneyn iyagoo sabab uga dhigaya in ay lagama maarmaan u tahay xaaladdu dalku ku jiro.
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad iyo 2aad ee Barlamanka Puntland ayaa arrintan heshiis kula ah Madaxweyne Gaas oo muddooyinkii dambe aad u raadinayay in loo sameeyo muddo kordhin ay ku xiriirinayaan colaada Tukaraq.
Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaam iyo Xuseen Xaaji Yaasiin Diiriye ayaa muddo kordhinta ay raadinayaa si hoose u wada iyagoo kulamo la qaatey Madaxwynaha iyo xubno kale oo aad ugu dhow.
Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Barlamanka Puntland ayaa cabsi qaba in beeshiisa dib u soo dooran waydo madaama uu Barlamanka ka tirsanaa tan iyo intii maamulkaan dhidibada loo taagey sanadkii 1998.
Tallaabadan ayaa soo shaacbaxaysa xilli maanta goluhu ansixiyay Ajandaha kalfadhiga 41aad ee Barlamanku ka doodi doono mudada uu furanyahay.
Talabadaan ayaa waxaa horey uga digey siyaasiyiin u sharaxan xilka Madaxweynaha Puntland kuwasoo sheegey in talaabo noocaan ah maamulkaan u horseedeyso jahawareer iyo sharciyada dowladnimada oo meesha ka baxda. Halkaan Ka Akhri
Dhinaca kale warar ayaa sheegaya in qurba joog badan oo ka timid waddanka dibadiisa kuwasoo Madaxweynaha qaarkood waraabiyo dhow yihiin dedaal ugu jiraan sidii loo siyaadin lahaa waqti xileedka xukuumadda.
Dedaaladan ayaa imaanaya xilli Madaxweynaha Puntland cabsi ka qabo in dib loo soo dooran waayo Jan 8,2018 hadii markale uu kalsooni waydiisto xildhibaanada ay soo xulayaan beelaha dagan Puntland.
Cabdiwali Maxamed ayaa intaas ku daray in dowladda iyo hay'adda lagu..
Gaas oo shacabka Puntland ku eedeeyay fashilka Nidaamka Dimuqraadiyadda [Daawo]
Puntland 14.09.2018. 01:56
Puntland: Baaqyo loo diray colaad ka hurtay xadka Nugal iyo Sool
Puntland 20.12.2017. 15:54
Madaxweynaha Puntland oo u dhoofay Baydhabo
Puntland 03.06.2018. 12:50